शायद लगभग अद्भुत फिलिम हामीलाई हरेक एक देख्यो "स्प्रिंग को सत्र क्षणहरू।" सम्झना, जर्मन सैन्य बुद्धि सदस्यहरू गर्न dossier शब्दहरू थिए: "नर्डिक प्रतिरोधी को प्रकृति"? त्यसैले हामी सबै भन्दा राम्रो को सबै भन्दा राम्रो कुरा। तथापि, यो राम्रो, यो व्यक्तित्व विशेषता, यो हो भने छ यस्तो revered र नागरिक लागि कदर नाजी जर्मनी को? का एक नर्डिक वर्ण के हो बुझ्न गरौं।
सुरु लागि शब्द को etymological जरा मा हेर्न राम्रो छ। धेरै भाषाहरू देखि अनुवाद "नोर्ड" उत्तर हो। तसर्थ, एकैचोटि धेरै को मन मा चिसो, कठोर छविहरू गठन हुनेछ पर्यावरण अवस्था, सूचीबद्ध ती समान संयम र अन्य सुविधाहरू। तसर्थ, को, स्थिर नर्डिक, चिसो, अनुभवी प्रकृति - पर्याय हुन्।
माथि उल्लेख गरिएझैं यी व्यक्तित्व लक्षण विशेष गरी मूल्यवान नागरिक (विशेष सैन्य र बुद्धि) नाजी जर्मनी को। कारण के थियो? तथ्यलाई एडल्फ हिटलर आविष्कार कि (त्यो सहि - आविष्कार), केही आर्य जाति, जो, मानिन्छ, सबै भन्दा अन्य जात बीचमा महत्त्वपूर्ण, यो शक्ति, साहस, steadiness, लगनशील भई लागिरहेमा र छ किनभने भव्य उपस्थिति। यसैले, नर्डिक चरित्र "साँचो Aryans" मा निहित हुन मानिन्छ थिए आवश्यक तत्व र व्यक्तित्व लक्षण थियो। यो यस्तो मान्छे नाजी जर्मनी को आवश्यक कार्यहरू सक्षम छन् कि विश्वास छ।
म जो गर्नुपर्छ एक नर्डिक वर्ण संग संयुक्त गर्न को उपस्थिति बारेमा केही शब्द भन्न आवश्यक छ। यो Norden मा, पुरुष वा महिला कि, संकीर्ण अनुहार लम्बी आकार हुनुपर्छ। नाक पनि साँघुरो र लामो, उल्लेखनीय र प्रत्यक्ष। चिउँडो - कोणीय। युरोपेली प्रकार, मध्यम आकार को आँखा, एक खैरो वा नीलो रंग हुनुपर्छ। बाल - गोरो, खरानी, रंग गोरो। आंकडा - स्लिम, विकास - उच्च। Nords राम्रो शक्ति र भौतिक शक्ति हुन आवश्यक छन्।
विषय टाढा सार्दा एक बिट, म नाजी जर्मनी को शासन र सैनिक कुलीन को कुनै पनि यो तस्बिर मिलने भनेर याद गर्न चाहन्छु। हिटलर, Goebbels, Himmler, रेम ... ती सबै, पाठ्यक्रम, कठिन र "चिसो" थिए, तर आफ्नो उपस्थिति को आर्य र नर्डिक अनुरूप छैन।
आज, "नर्डिक वर्ण" को रूपमा यस्तो कैरेक्टराइजेशन साधारण मानिसहरूलाई लागू हुन्छ, यूरोप साथै। यस मामला मा, यो आवश्यक छ कि यस्तो वर्ण मानिसको - दुष्ट र क्रूर। छैन सबै। यसले राम्ररी हरेक चरण, को "फाइदा" र "बुरा" वजन विचार शब्दहरू धेरै होसियार छन्, बस एक धेरै राम्रो-सन्तुलित छ भन्ने हो (तिनीहरूलाई केवल जस्तो uttered भन्छु, वा एक वाक्य, गर्न अरू केही), को एक उच्च डिग्री छ दृढता र चिसो को र महत्वपूर्ण विभिन्न परिस्थितिहरु मा चतुर विश्लेषण।
हामी सकारात्मक र नकारात्मक लाभ गर्न, नर्डिक वर्ण को पक्ष कुरा भने समावेश:
- तनाव प्रतिरोध;
- क्षमता चाँडै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न;
- शान्त र संयम।
बुरा लागि, तिनीहरूको पर्याप्त:
- बन्द, नराम्ररी introversion उच्चारण;
- साथी, परिवार बनाउने, मान्छे सँग कुराकानी गर्न नसक्नुको;
- कमजोर भावना।
नर्डिक वर्ण - एक दुर्लभ विशेषता, लगभग एक "एकाग्रचित्त" फारममा उत्पन्न गर्दैन। यस्तो प्रकृतिको धारकों रूपमा मात्र बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो सकारात्मक गुणहरू प्रयोग चाहनुहुन्छ।
अन्ना Bykova र उनको पुस्तक अल्छी आमा "" "स्व-बच्चा, वा कसरी बन्न"
अपरेसन "पुनर्गठन": आफैलाई परिवर्तन कसरी गर्ने?
आत्मसंयम के हो? एक व्यक्ति को असल गुणहरू
आत्म-संगठन - सफलता बाटो छ
प्रौद्योगिकी प्रक्रियाहरू र उत्पादन को स्वचालन: विशेषताहरु
विवरण के हो र जब उनि उपयोगी हुन सक्छ?
Oleg बयको, व्यवसायी: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
Multivarka रेडमन्ड RMC-4503: समीक्षा, विनिर्देशों, परिचालन निर्देश
को जाडो लागि तला मशरूम: खाना पकाउन सिक्नु
वाहन अर्को मोटर जडान गर्ने। कार मा इन्जिन को प्रतिस्थापन कसरी बनाउने?